Ra’iisul wasaare Kheyre oo maanta safarkiisii ugu horeeyay ku tagaya magaalada Baydhabo – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaare Kheyre oo maanta safarkiisii ugu horeeyay ku tagaya magaalada Baydhabo
Waxaa saacadaha soo socdo la filayaa in ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre uu safarkiisa ugu horeeyo ku gaaro magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Uljeedka safarka ra’iisul wasaare Kheyre ee magaalada Baydhabo ayaa la sheegayaa inuu salka ku haayo sidii uu qiimeyn ugu sameyn lahaa halka ay gaarsiisan tahay abaarta ka jirta deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Ra’iisul wasaare Kheyre ayaa markii uu gaaro Baydhabo wuxuu halkaasi kula kulmi doonaa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Shdeekh Aadan iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan maamulkaas.
Dhammaan mas’uuliyiintaasi ayaa kulankooda uga hadli doonno sida ugu macquulsan ee gargaar loogu fidin lahaa dadka abaarta iyo shubanka ay isugu darsameen ee ku sugan gobolada ku yaala Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Dhinaca kale, ammaanka magaalada Baydhabo ayaa saakay ah mid si weyn loo adjkeeyay, waxaana magaalada lagu arkayaa ciidamo badan oo isugu jira AMISOM iyo kuwa dowlada federaalka Soomaaliya, kuwaas oo xaqiijinaya ammaanka guud ee wafdiga la filaayo inay maanta halkaasi gaaraan.